एसएलसीपछि के गर्ने ? - एसईई - साप्ताहिक
एसएलसीपछिको निर्णयले नै हरेक विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्छ । यही समयमा विद्यार्थीले आ–आफ्नो भविष्यको बाटो निर्धारण गर्छन् । यसका लागि सही निर्देशन तथा सही जानकारी हुनु आवश्यक छ । नेपालमा यस्ता विद्यार्थीलाई करियरसम्बन्धी सही सल्लाह दिने संस्था धेरै छैनन् । जति छन् ती सबै व्यवसायिक छन्, जसको उद्देश्य पैसा कमाउने मात्र हो । एसएलसीपछि विद्यार्थीहरूले आफ्ना भविष्यका बारेमा चिन्ता गर्दा रोजगार बजारमा माग भएका विषयहरूका बारेमा पनि सोच्नु आवश्यक हुन्छ । एसएलसीमा मात्र राम्रो अंक ल्याएर हुँदैन, त्यसपछि प्लस २ वा अरू तहमा पनि आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्नुपर्छ । एसएलसीपछिको बाटो विज्ञान, व्यवस्थापन आदि विषय हुँदै निर्धारण हुन्छ । विज्ञानले डाक्टर, इन्जिनियर हुने बाटो देखाउँछ भने अन्य विषयले फरक–फरक क्षेत्रका बाटो देखाउँछन् । कुन बेला कुन प्रविधि वा योग्यताले तुरुन्तै स्थान पाउँछ र त्यसको महत्व बढ्छ भन्ने कुरा जान्नु अति आवश्यक छ । उदाहरणका लागि आज नर्सिङको धेरै माग छ, थुप्रै कलेजले यो विषय अध्यापन गराइरहेका छन् तर ४–५ वर्षपछि नर्सिङको माग नहुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको बजारमुखी व्यवस्थामा निकट भविष्यमा देखा पर्न सक्ने सबै खालका सम्भावनाहरूमा चनाखो रहनु आवश्यक छ ।
विगतको अवस्था नियाल्ने हो भने आज हाम्रा विद्यार्थीहरू विदेश गैरहनु पर्दैन । धेरैजसो विषयको पढाइ नेपालमै हुन्छ, अझ डाक्टर र इन्जिनियर बन्न त केही दुख गर्नै पर्दैन, राम्रो शैक्षिक पृष्ठभूमि र लगानी गर्नसक्ने क्षमता भए पुग्छ । यद्यपि के हामीकहाँ सञ्चालन भैरहेका सबै मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ कलेजले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिररहेका छन् ? यसको विश्लेषण अभिभावकहरू आफैंले गर्नुपर्ने भएको छ । कुन कलेजका कस्ता विद्यार्थीले कस्ता कम्पनीमा कस्तो किसिमको रोजगारी पाएका छन् मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । त्यति मात्र होइन, कतिपय कलेजले विदेशी विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूबाट सम्बन्धन प्राप्त गरेर विदेशमा अध्ययन गर्दा पाइने योग्यता नेपालमै उपलब्ध गराउन थालेका छन् । एसएलसीपछि विद्यार्थीले यिनै कुरा मनन गरेर कुन विषय पढ्ने भन्ने निर्णय लिनुपर्छ ।
एसएलसीपछि अधिकांश विद्यार्थी डाक्टर र इन्जिनियर बन्ने सपनासहित प्लस २ मा भर्ना हुन्छन् तर व्यवस्थापन, मानविकी जस्ता विषय पनि छन् जसमा रुचि राख्ने विद्यार्थीले भविष्यमा राम्रा अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्छन् । यसबाहेक विद्यार्थीहरू सोझै रोजगार बजारमा प्रवेशका लागि अल्पकालीन व्यवसायिक तालिममा समेत सहभागी हुन सक्छन् जसले उनीहरूलाई छोटो समयमै भविष्यको बाटो देखाउन सक्छ । यसबाहेक कुन विषयको अध्ययनपछि रोजगार बजारमा तत्काल प्रवेश पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको ज्ञान राख्ने हो भने पनि विद्यार्थीहरूले अन्यौलमा बस्नु पर्दैन । उदाहरणका लागि धेरैको ध्यान नगएको वनविज्ञान, अस्पताल व्यवस्थापन, संस्कृत, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित पारा मेडिकल विषयक प्राविधिक शिक्षा, सामाजिक विकास, फेसन डिजाइनिङ, होटल व्यवस्थापन जस्ता थुप्रै विषय अहिले अध्ययनका लागि उपलब्ध छन् ।